MW Xasan Sheekh wuxuu ahaa aabaha guusha badda - RW Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
MW Xasan Sheekh wuxuu ahaa aabaha guusha badda - RW Rooble
RW Soomaaliya, ayaa geesiga guusha badda u aqoonsaday Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaaha Xukuumadda Xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseeen Roobe, ayaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay, guusha uu qaranku ka gaaray dhiggiisa Kenya, taas oo la xariirta dacwdii kiiska badda Soomaaliya ee Kenya muranka galisay.
Ra’iisul Wasaaraha oo shir-guddoomiyay kulan ku qabsoomay aaladda fogaan aragga ZOOM, oo ay ka qeyb galeen, ergada Soomaaliya ee shalay joogay Qasriga Nabadda, ayaa waftigii uu hoggaaminayay Ra’iisul Wasaare ku xigeynka dalka Mahdi Guuleed, uga mahad celiyay howsha qaran oo ay qabteen.
Sidoo kale, RW Rooble, wuxuu u tacsiyeeyay una mahad celiyay AUN, injineer Saalixi, oo ka mid ahaa garyaqaannadii Soomaaliyeed ee juhdiga badan ku bixiyay badbaadada badda, nasiib-xumo waqtigiisa ayaa ka soo hor maray, natiijadii guusha uu 12-ka sano ka soo shaqeynayay.
Muna Sharmaani, iyo Wasiir Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan, oo door muhiim ka ciyaaray dacwada badda ayuu si weyn ugu hambalyeeyay RW, halka uu kaalintooda xusay saddexdii Dowlad ee kala danbeysay.
Hayeeshee, Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, ayaa geesiga dacwada badda u aqoonsaday Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaas oo uu ku tilmaamay “abaaha guusha badda”.
“Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ahaa aabihii geeyay kiiskaas Maxakamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda, billowgeedina isaga ayaa lahaa, waa ugu mahadcineynaa, maanta guusha soo hoyatana isaga ayaa hormuud u ahaa”. Ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha.